१० करोडको बाइकमा ३० करोडको पेन्टिङ
हार्ले डेभिडसनले हालसालै आफ्नो एक बाइकमा विश्वमा सबैभन्दा महँगो पेन्टिङ गरेको छ, जसको मूल्य ३० करोड रुपैयाँ छ । बाइकको मुल्य भने १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त बाइकमा विश्वका प्रख्यात आर्टिस्ट ज्याक आर्मस्ट्रङले पेन्ट गरेका थिए । ज्याक आर्मस्ट्रङको...
भविष्यको डेलिभरी भ्यान, रेनोले ल्यायो यस्तो सेल्फ ड्राइभिङ भ्यान
इजी–प्रो कन्सेप्ट रेनोको इलेक्ट्रिक तथा सेल्फ ड्राइभिङ भ्यान हो । यो अटोनोमस भएकाले चलाउनका लागि ड्राइभर आवश्यक पर्दैन । यसलाई पोर्टेबल अफिस वा फुड ट्रकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो भीडभाडयुक्त सहरी क्षेत्रमा पनि चलाउन सकिन्छ । हाल डिजेलले...
बाइक होइन, ट्राइक (भिडियो सहित)
उनले सन् १९५९ मा साथीको खेतबाट स्कुल बसलाई रेस्क्यु गरे । त्यसको इन्टेरियरलाई हाल २८ इन्च छोट्याए । यसको पछिल्लो भागमा ट्रकको टायर राखे । उनी अर्थात वाल्ट मोस । वाल्ट मोसले यसलाई बनाएका हुन् । वाल्ट मोस ट्रकिङ इन्कको सर्बाधिक प्रसिद्ध सो सवारी साधन...
यसरी राखिएको थियो कार कम्पनीका नाम, हेरौं रोचक तथ्य
के तपाईलाई थाहा छ, विश्वका प्रसिद्ध र लक्जरी कारको नामाकरण कसरी भएको हो ? आउनुहोस् यसको बारेमा केही रोचक तथ्यहरु हेरौं । एस्टन मार्टिन - एस्टन मार्टिन कारको नाम यसका संस्थापक लियोनेल मार्टिन र एस्टन हिलको नामबाट राखिएको हो । सन् १९१४ मा लियोनेल मार्...
जर्मनीमा आयो विश्वकै पहिलो हाइड्रोजन ट्रेन
जर्मनीमा हिजो देखि विश्वकै पहिलो हाइड्रोजनबाट चल्ने रेलले सेवा प्रारम्भ गरेको छ । चम्किला निलो रङका कोराडिया आइलिन्ट नामक रेलले उत्तरी जर्मनीको एक सय किलोमिटर रुटमा सेवा प्रारम्भ गरेका छन् । एक ट्यांकी हाइड्रोजन भएमा यी रेल एक हजार किलोमिटर सम्म गुड...
यस्तो छ ५६ करोडको सुपरबाइक
विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा गुड्ने सुपरबाइक कुन होला ? कहिले अनुमान गर्नुभएको छ ? छैन भने आउनुहोस् आज हामी तपाईंलाई विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिको सुपरबाइकको बारेमा जानकारी दिदैं छौं । डज टोमाहक विश्वको सबैभन्दा पावरफुल सुपरबाइक हो । यो सुपर बाइकको ट...
बाइक होइन, इलेक्ट्रिक स्कुटर
हामीले स्कुटरको डिजाइन सामान्यतः सबैको एकै प्रकारको देख्छौ । तर हाल अलि फरक डिजाइनको स्कुटर बजारमा उपलब्ध भएको छ । मिकु म्याक्स नामक सो इलेक्ट्रिक स्कुटरको डिजाइन नै फरक छ र धेरैजसो मोटरसाइकलसँग मिल्दोजुल्दो छ । चीनको इलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माता कम्...
खुट्टाले कार चलाउने विश्वको पहिलो रेसिङ ड्राइभर
पोल्याण्डमा बस्ने ३२ वर्षिय बार्टेक ओस्तालोस्की सम्भवतः विश्वको पहिलो रेसिङ ड्राइभर हुन्, जसले खुट्टाले कार चलाउछन् । करिब १५ वर्ष अगाडि एउटा भयानक मोटरसाइकल दुर्घटनामा उनको दुबै हात गुमेको थियो । यो दुर्घटना पछि उनले आफ्नो प्रोफेसनल रेसिङ ड्राइभर ब...
यस्तो थियो इन्डोनेसियाको भेस्पा फेस्टिभल, पहिलो पटक ४५० सहभागी
प्रस्तुत तस्बिर इन्डोनेसियाको भेस्पा फेस्टिभलको हो । तीन वर्ष पहिले प्रारम्भ भएको सो फेस्टिभल कस्टमाइज बाइकको सर्बाधिक ठूलो फेस्टिभल बनेको छ । यो वर्ष पहिलो पटक ४ सय ५० मानिसहरु आफ्नो भेस्पा स्कुटरलाई मोडिफाई गरी उपस्थित भए । विभिन्न क्षेत्रबाट ७ हज...
बदला लिनको लागि बनेको थियो ल्याम्बोेर्गिनी स्पोर्टस् कार
ल्याम्बोर्गिनी विश्वको चर्चित लक्जरी र स्पोर्टस् कार निर्माता कम्पनी हो । हाल यो कम्पनीका कार निकै लोकप्रिय छन् । यद्यपि सबभन्दा पहिले यो कम्पनीले कसैसँग बदला लिनको लागि कार बनाएको थियो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । ल्याम्बोर्गिनीले सबैभन्दा पहिले ट्रयाक...
जापानमा प्रारम्भ भयो ड्राइभरलेस कार सेवा, १ किलोमिटर यात्रा गर्न ३ सय रुपैयाँ
जापानको राजधानी टोकियोमा ड्राइभरलेस कार सेवा प्रारम्भ भएको छ । ड्राइभर विनैको सवारी साधनले यस प्रकारको सेवा प्रारम्भ गरेको हो । विना ड्राइभरको कार उपलब्ध भए पनि यसको सवारीको लागि भने महँगो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । यो कारमा यात्रा गर्...
विश्वको सबैभन्दा महँगो नम्बर प्लेट, मूल्य २ अर्ब भन्दा बढी
तपाईंहरुले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट त देख्नु भएकै होला । यी नम्बर प्लेटहरु सरकारी नियम अनुसार नै लगाइएको हुन्छ । जसको मुल्य सायद एक सय देखि दुई सय मात्र हुन्छ । केही महिना अगाडि नेपाल सरकारले इम्वोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा लिएर आएको छ र य...
यस्तो छ पानीमा चलाउन सकिने कार बबल्स
अटोमोबाइलको सीमा अब जमिनमा मात्र सिमित रहेन । आगामी दिनमा समुद्री सतहमा पनि यसको प्रयोग हुने भएको छ । जमिनमा बाहुल्यता जमाइसकेको अटोमोबाइल क्षेत्र छलाङ्ग मारेर समुद्री सतहमा पनि पुगेको छ । हालसालै वैज्ञानिकहरुले एउटा यस्तो कारको विकास गरेका छन् जसको...
सुटकेसमा फोल्ड गर्न मिल्ने मोटरसाइकल
वैज्ञानिकहरुले सुटकेसमा फोल्ड गरेर राख्न मिल्ने विद्युतीय मोटरसाइकलको आविष्कार गरेका छन् । सिटगो नामको सो इलेक्ट्रिक बाइकलाई सुटकेसमा प्याक गरेर ट्रेन, बस, रेष्टुरेन्ट, बार, क्याफे र वजार जस्तो ठाउँमा आरामले लिएर जान सकिन्छ । सिटगो बाइकलाई चार्ज गर्...
अफिस जादा नीता अम्बानी चढ्छिन् १०० करोड भारुको कार
काठमाडौं – भारतकी नीता अम्बानी १०० करोड अर्थात अर्थात १ अर्ब भारुको कार चढ्छिन् । उनी भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीको श्रीमती हुन् । नीता भारतको सबैभन्दा महँगो कार चढ्ने महिला हुन् । उनीसगँ आउडीको स्पेसल एडिसन आउडी ए९ च्यामेलियन का...
रेष्टुराँबाट खाना लिएर जानेछ ड्राइभरलेस गाडी, भेन्डिङ मेसिनबाट हुनेछ भुक्तानी
अब यस्ता दिन पनि नजिक आउँदै छन्, जसमा मानिसको सम्पर्क बिनै रेष्टुराँको खाना खान सकिने छ । एउटा ड्राइभरलेस अर्थात मानिस नै नभएको कारले रेष्टुराँको मिठो खान लिएर आउने छ र फर्किने छ । त्यो खानाको पैसा तिर्न फेरि रेष्टुराँ पुग्नु पर्ने छैन । गाडीमै भएक...
संसारकै सर्बाधिक सानो कार लिलामीमा
खेलौना जस्तै देखिने ‘जेले १०००’ नामक यो कार आगामी साता लिलामीमा राखिने भएको छ । यसलाई ब्रिटिश कम्पनी जागाटोले बनाएको हो । सम्भवतः संसारकै सर्बाधिक सानो कार मानिएको जेले १००० लाई लण्डनको सोदबी ग्यालरीमा लिलाम गरिने छ । यसको मूल्य ५ हजार द...
किम कार्दासियनलाई श्रीमानले कारबाट ओराले, भाइरल बन्यो तस्बिर
प्रसिद्ध हलिउड अभिनेत्री किम कार्दासियनलाई उनका श्रीमान कान्ये वेस्टले कारबाट ओरालेको तस्बिर भाइरल बनेको छ । ३७ वर्षिया किमलाई उनका ४१ बर्षिय श्रीमान्ले मायाका साथ कारबाट ओरालेका थिए । उनीहरु गत शनिबार मियामीस्थित साथीको वैवाहिक समारोहबाट फर्किदा आइ...
नाम बताऔं कार जितौं, के होला हुन्डाईको नयाँ कारको नाम ?
हुन्डाई इन्डियाले भारतमा लन्च गर्ने नयाँ कारको नामाकरण गर्नका लागि सबैलाई अनुरोध गरेको छ । हुन्डाईले सानो कार बजारमा उतार्ने तयारी गरिरहेको छ । हाल यसको कोड नेम एएच२ राखिएको छ । धेरैले यसको नाम स्यान्ट्रो हुने र पहिलेकै स्यान्ट्रो नयाँ रुपमा आउने अन...
बाइकर ड्युड भिडियो, जसमा सद्गुरु र बाबा रामदेब चढेका छन् डुकाटी स्क्र्याम्बलरमा
जिन्दगी हाँसेर जिउन सिकाउने दुई प्रसिद्ध ब्यक्तित्व सद्गुरु र बाबा रामदेव बाइक चढेको भिडियो हालै सार्वजनिक भएको छ । सद्गुरु एपमा उपलब्ध सो भिडियोको नाम भने ‘बाइकर ड्युड्स’ राखिएको छ । भिडियोमा सद्गुरु र बाबा रामदेव दुवै डुकाटी स्क्र्याम्...
सावधान : अगाडि म्युजिकल रोड छ, कुन देशमा कस्ता रोड ?
संसारका विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता सडक पनि छन्, जहाँ गाडी चलाउँदा संगीत सुनिन्छ । संसारका विभिन्न देशमा भएका यस्ता ४ सडकको बारेमा छोटो जानकारी दिइएको छ । डेनमार्कसंसारकै पहिलो म्युजिकल रोड डेनमार्कको ‘द अल्फाल्टोफोन’ हो । सन् १९९५ मा यसको न...
यसरी नष्ट गरियो ६० करोड भन्दा बढीका लक्जरी कार र बाइक (भिडियो सहित)
फिलिपिन्समा ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका लक्जरी कार र मोटरसाइकल नष्ट गरिएको छ । राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेको आदेशमा ती सवारी साधन नष्ट गरिएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति रोड्रिगोको समेत उपस्थिति थियो । तर किन त्यति महंगा गाडी र मोटरसाइकल नष्ट गरिएको ह...
जब रेड लाइट बल्छ, यस्तो डान्स हुन्छ सडकमा
यो तस्बिर मेक्सिकोको हो । यहाँ प्रत्येक साता सडकमा ट्राफिक सिग्नलको अगाडि यस्तै डान्स गरेको देखिन्छ । जब सडकमा भएको ट्राफिक संकेतमा रेड लाइट बल्छ, यी ट्राफिक डान्सर सडकमा आएर डान्स गर्न थाल्छन् । जब ग्रिन लाइट बल्छ, डान्सरहरु सडक खाली गरेर आफ्नै स्...
कार पार्किङको लागि साढे ८ करोड, यस्तो छ पार्किङ
सुन्दा अचम्म लागे पनि यो कुरा सत्य हो । हङकङको हो म्यान टिनका एक व्यक्तिले आफ्नो लक्जरी कारको लागि ६ मिलियन हङकङ डलर अर्थात करिब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको पार्किङ मल किनेका छन् । कुलुन शहरको नजिक हो म्यान टिनस्थित अल्टीमा अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्समा सो पा...